Yɛhwɛɛ ananse ne wɔn ntentan ho nsɛm. Ananse ntentan na ɛtumi boa ananse ayɛ nneɛma pii. Wɔ sene wɔn ntentan na ɛkyɛ dɔnhwere baako. Wɔyɛ anadwo biara. Wɔde kye mmoawa afoforɔ. Ntentan akɛseɛ akɛseɛ no tumi kye nnomaa nketewa. Ananse bi na wɔn nkyerekyere ntentan da. Wɔkɔ ananse afoforɔ hɔ na wɔwe wɔn. Ananse nketewa bi na wɔwe ananse akɛseɛ.
Afei wɔde hintahinta. Ananse bi wɔ hɔ kyerekyere ntentan akɛseɛ gu edua bi ho. Ɛma ntentan kɛseɛ a yɛntumi nhu wɔ mu na ɛkata ananse so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mmoawa akɛseɛ anaa nnomaa. Osuo nso rentumi nkɔ mu. Nti ananse no na ɔde tokuro hyɛ ntentan dan no mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nsuo tumi kɔ mu berɛ a osuo tɔ.
Mmoawa bi wɔ hɔ a wɔ kyerekyere sirikyi na ɛsɛn firi ɔbodan na mmoawa a wɔfiri nsuo a ɛwɔ abodan no fam na wɔhu sɛ mmoawa no wɔhyerɛn. Nti wɔ tu kɔ soro na yɛkye wɔn.
This entry was posted	on Monday, June 8th, 2020 at 3:14 pm	and is filed under Twi. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.